ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 229
အရာရာအားလုံး … ဟောင်းနွမ်းလွန်းနေလို့
ဆောင်းယွန်းလ မတ် ၁၊ ၂၀၁၂ အရင်တုန်းက ငါတို့တတွေလည်း အခု မင်းတို့လိုပါပဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြတယ်…. သီချင်းတပုဒ်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လက်ဖက်ရည်တခွက်ကို တယောက်တဝတ် သောက်တတ်ခဲ့ကြဖူးတယ်… ကဗျာတပုဒ်ထဲမှာလည်း သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဆေးပေါ့လိပ်တလိပ်ကို တယောက်တဖွာ အိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြဖူးတယ်… ငါတို့ထက်ကျစ်လစ်တဲ့ လက်သီးဆုပ်တွေတောင် ငါတို့လက်သီးတွေလောက် မကျစ်လစ်ခဲ့ကြဘူး… ငါတို့ထက်အားကောင်းတဲ့ လက်မောင်းတွေတောင် ငါတို့လက်မောင်းတွေလောက် အားမကောင်းခဲ့ကြဘူး… အဲသလို… ပြောရင်း …ဆိုရင်း …နေရင်း ….ထိုင်ရင်း …. ကုန်လွန်ခဲ့ကြ… တက်လှမ်းခဲ့ကြ …ဖြတ်သန်းခဲ့ကြ… ပြန်မရနိုင်တော့မယ့် နာရီတွေက ရာသီစာ ကဗျာတပုဒ်ထက် ပိုပြီး …..နက်နက်နဲနဲ… အခုတော့…. ငါတို့အားလုံးတွေရဲ့ဘဝတွေထဲမှာ အရင်အတိုင်းဆိုတာတွေထက် ပိုလွန်းတဲ့ မလိုအပ်မှုများနဲ့ မှားယွင်းစွာ ခါးသီးဟောင်းနွမ်းနေကြ… ဖြစ်နိုင်ရင်….. လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀ ကျော်ကာလကို...
မောင်စွမ်းရည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ အညာကျေးလက် ကုန်းတက်ကုန်းဆင်း၊ ကုန်းကျင်းထဲမှာ ဆူးခက်ကာတဲ့ ရွာကလေး။ ရွာကလေးမှာ ရွာပြင်ရွာတွင်း သူငယ်ချင်းလို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် သစ်ပင်ကြီးငယ်၊ ဖက်တွယ်ဆင်းတက် ကိုင်းခက်နိမ့်မြင့် အဆင့်အဆင့်မှာ ပွင့်ပုံသီးပုံ၊ ပျားအုံ ပုတ်သင် ဘယ်အပင်မှာ ဘာရှိတာကို ငါမသိတာ မရှိခဲ့။ မြို့ပြနဲ့ဝေး၊ မြစံနဲ့ဝေး ကျေးတော ကျောက်ကုန်း သဲကျောက်တုံးတို့ ကျောက်ဖြုန်း စရစ်ဖွေး။ ကျောက်စရစ်ကုန်း နုန်းမြေမတင် ရှားစောင်း မိုးနံ ဇီး ခံပင် ပုတက်က၀င်၊ ဖွတ်ကထွက် နွားကျောင်းသား တို့များသူငယ်ချင်း ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့နှက်။ မိုးခေါင်ရေရှား၊ တို့များကျေးရွာ မိုးအကျ၊ ပျိုးကြဲစိုက်ကြရှာ။ ပဲပြောင်းနဲ့ နှမ်း၊ ၀ါ ယာရှိသူက ယာကိုစိုက် ယာမရှိသူက အငှားလိုက် မရှိလဲစိုက်...
ကွန်စစ်ကောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ လာခဲ့ … အစ်ကိုလဲ လာခဲ့ ညီလေးလဲ လာခဲ့ အစ်မလဲ လာခဲ့ ညီမလေးလဲ လာခဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ လာခဲ့ မိတ်ဆွေတွေလဲ လာခဲ့ အားလုံးကို ပေါင်းစုမှ အင်အားတစ်ခုကို ရမှာပေါ့။ ယူခဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ယူခဲ့ လေးစားမှုကို ယူခဲ့ ရိုးသားမှုကို ယူခဲ့ မြင့်မြတ်မှုကို ယူခဲ့ ဇွဲလုံ့လကို ယူခဲ့ သတ္တိကို ယူခဲ့ အားလုံးကို ပေါင်းစုမှ စွမ်းဆောင်ရွည်တစ်ခုကို ရမှာပေါ့။ လာခဲ့ကြ အားလုံးလာခဲ့ကြ ယူခဲ့ကြ အားလုံးယူခဲ့ကြ။ ။ No tags for this post.
နိုင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ အာဏာရှင်တွေ အာဏာမမက်တော့ဘူး ယုံမလားတော့မသိဘူး၊ ယုံတမ်းစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ကျဗန်းစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး အောင်မှတ်ရမဲ့ စာစီစာကုံးရေးနေတာမဟုတ်ဘူး ပြည်ပက ဟိုဘက်မလိုက် ဒီဘက်မလိုက် မြန်မာသတင်းဌာနက သတင်းကြေညာတာမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူမှနားမထောင်တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက သတင်းလွှင့်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အာဏာရှင်က အာဏာရှင်ဖြစ်တာ ခေတ်ကုန်သွားပြီ ခေတ်ပျက်ငွေရှင်တွေ စနစ်တကျပညာရှင်တွေ အာဏာရှင်ဖြစ်ချင်လာတဲ့ တူးဟန်ဒရက်ယီးယားဘီဖိုး ပြန်ဆိုတေးစီးကြောင်းမှာ ကိုယ်တိုင်သဘောမတူပေမဲ့ စကားလုံးလှလှလေးသုံးတဲ့ အများသဘောတူရင် လေးဆယ့်ကိုးနဲ့ငါးဆယ့်တစ် ငါးဆယ့်တစ် အသာရတဲ့ခေတ်မှာ ငါးဆယ်မှာတစ်ပေါင်းဖို့ ငါးဆယ်မှာတစ်နှုတ်ဖို့ မနှုတ်လောက်တစ်ဆယ်ချေး … လျှော်ဖို့စားဖို့ကြံနေတဲ့သူတွေ အကြံကုန် ဂဠုန်အဖြစ်ခံ … ဆားချက်မဲ့သူတွေ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချ … မွေးမြူရေးလုပ်ချင်သူတွေ ထင်းခွေမကြုံ ရေခတ်မကြုံ … အဝီစိတွင်းတူးချင်သူတွေ တိုက်ရာပါငွေနဲ့ … ဂေါပကအလုပ်လျှောက်လွှာတင်ထားသူတွေ...
ချိုတူးဇော် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘုရားသခင်ဆီမှာ. . . မေတ္တာတော် တောင်းခံပါတယ် ကျနော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ထံမှ မေတ္တာတော်ကို ဖြန့်ဝေပါတယ်။ နာကျင်မှုတွေနဲ့ နာကြည်းစွာ ကျခဲ့ကြတဲ့ မျက်ရည်များကို မေတ္တာတော်တို့ဖြင့် ရပ်တန့်ကြပါအံ့။ ဟောဟိုက ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ မွေးဖွားလာတဲ့ ကချင်ကလေးငယ်တယောက်ရဲ့အနား သူ့ဖခင် မရှိရှာဘူး။ အဲဒီလိုပဲ နောက်တန်း အိမ်ထောင်သည်လိုင်းထဲက ဆနွင်းဝါ၀ါနဲ့ မီးနေသည်ရဲဘော်မယားက သူ့သားကို မချီရင်း . . သူ့လင်သားကို တ,နေတယ်။ ကလေးတွေက တအဲ့အဲ့ အဖေတွေ တဒိုင်းဒိုင်း တဒက်ဒက် အဲဒါ ငါ့တို့ပြည်ထောင်စုပဲ. . .။ ဘယ်ကလေးမှ ဖခင်မဲ့ဖြစ်စရာမလို ဘယ်မိခင်မှ မုဆိုးမ ဖြစ်စရာမလို ဘယ်သူက နယ်ချဲ့လို့ ဘယ်သူက...
မရှိခြင်းကို မျှော်လင့်ပါ၏ ငါတို့ရွာ
နိုင်ဦးညို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ အမှောင် မရှိ …။ ဧည့်စာရင်း မရှိ …။ ရာအိမ်မှူး မရှိ …။ ကြက်ဆူပင် မရှိ …။ စွမ်အားရှင် မရှိ …။ ဆက်ကြေး မရှိ …။ ပေါ်တာ မရှိ …။ မြှုပ်မိုင်း မရှိ …။ ဓါတ်ပေါင်းဖို မရှိ …။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မရှိ …။ ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့် မရှိ …။ ညညခဏလိုက်ခဲ့ပါ မရှိ …။ စစ်ခုံရုံး မရှိ …။ ငါးည မရှိ …။ နိူင်ကျဉ်း မရှိ …။ အာဏာရှင် မရှိ …။ ထလရ မရှိ...
Cho Tu Zaw – လှိုင်သာယာမှာ . . . နိုင်ငံရေး မရှိဘူး
လှိုင်သာယာမှာ . . . နိုင်ငံရေး မရှိဘူး ချိုတူးဇော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ကျမတို့မှာ ရေ မရှိဘူး ကျမတို့မှာ ရေမရှိဘူး ကျမတို့မှာ ရေမရှိဘူး။ (တကယ်တော့ ရေမရှိတာ မဟုတ်ဘူး တရားမရှိတာ. . တရားမဲ့နေတာ. .) ရေဝေမယ့် သူမရှိဘူး ထမင်းထုပ်ကမ်းမယ့် သူမရှိဘူး အားပေးမယ့် သူမရှိဘူး ဦးဆောင်မယ့် သူမရှိဘူး။ ဖျာပုံက လူတချို့ကို ခေါ်ပေးပါ။ ထားဝယ်က လူတချို့ကို မှာပေးပါ။ ဖွင့်ပွဲတွေနဲ့ အခမ်းအနားအစီအစဉ်တချို့ ရွှေ့ပေးပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံမှာ ခါးသီးနေတဲ့ ဘ၀တွေရဲ့ ခါးသီးနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတာမှ မဟုတ်ရင် နိုင်ငံရေး ဆိုတာ မရှိဘူး။ ...
Min Ko Naing – Poem
x x x မင်းကိုနိုင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ ခဲတံချွန်ပြီးပြီ ကျောင်းသင်္ခန်းပုံ ဆွဲချင်ဆွဲ ၀စ်လစ်စလစ်ပုံ ဆွဲချင်ဆွဲ သဘောပဲလေ ဒီမြေမှာ ဓါးလှံတွေ ကြဲချင်ကြဲ ချိုးငှက်တွေ ၀ဲလိုဝဲ သဘောပဲလေ စိတ်ချ ကလေးရေ စစ်တိုက်ခန်းတွေ မကြိုက်လို့ ထိုးကြိတ်ခန်းတွေ မကြည့်လို့ သူရဲဘောကြောင်တယ် မစွပ်စွဲဘူး ဒါပေမယ့် ကလေးရေ ကိုယ်ဆွဲရာ ကိုယ့်ကားချပ် ကိုယ့်လက်မှတ်တော့ ထိုးရမယ် (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂) Ref – http://www.facebook.com/photo.php?fbid=301146083272786&set=a.125771214143608.32841.100001321914808&type=3&theater No tags for this post.
Maung Gyi Nyein Chan – အညတရများ
“အညတရများ” မောင်ကြီးငြိမ်းချမ်း။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ မမ ၀င်းမော်ဦး ဘယ်ဘ၀မှာလည်း ကျနော် မမေးရက်ပါဘူး မမ မိဘတွေ အမျှဝေတာ မရှိသေးပေမယ့် တချို့တွေကတော့ ရေစက်တောင်ချပြီးပြီ။ ရန် ငါ စည်းပြတ်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ အတက်မှာ တွေဝေနေတဲ့ လင်းတအိုတွေ ကောင်းကင်မှာ ၀ဲသလိုမျိုး တိုင်းပြည်က ချောက်ထဲ နက်သည်ထက် နက်တော့မှာ မမ ရေ။ ၀မ်းနည်းခြင်းဆိုတဲ့ အမှတ်တရနေ့တွေမှာ နာကျည်းခြင်းဆိုတဲ့ နှလုံးသားကို လတ်တလော သေသွားတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားနဲ့ သူတို့ အစားထိုးပြီး ပျော်ဖို့ကြံနေတာ ကျနော်သိတယ် မမ ရေ။ အညတရဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ပေးဆပ်ခြင်း သက်သက်ဆိုပေမယ့် သိသင့်သလောက်တော့ သိပါတယ် ကျောင်းသားတွေ အမေမှ ငိုတတ်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အညတရတွေက ဥက...
အချိန်မြစ်ကြီးက ခင်ဗျားနဲ့ကျနော့်ဆီ ပြိုဆင်းလာနေတယ်
ဆောင်းယွန်းလ ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၂ ခင်ဗျားက နေသာလို့ နေသာသလို နေမယ်ဆို ကျနော်က ခင်ဗျားထက်တောင် နေသာသေးတယ်…. ဒီလိုသာ နေသာကြကြေးဆို တကမ္ဘာလုံး နေသာပြီး ကမ္ဘာကြီး ပြာကျပျက်စီးသွားတာ ကြာပေါ့… ခင်ဗျားက မိုးခါးရေကို ခင်ဗျားဝါကျနဲ့ ချိုချင်သလို ချိုမယ်ဆို ကျနော့် မိုးခါးရေက ကျနော့်ဝေါဟာရနဲ့ ပိုလို့တောင်ချိုသေးတယ်…. ဒီလိုသာ မိုးခါးရေချိုကြကြေးဆို တကမ္ဘာလုံး မိုးခါးပြိုပြီး ကမ္ဘာကြီး ရေလွှမ်းပျက်စီးသွားတာ ကြာပေါ့…. အချိန်ဆိုတဲ့ မြစ်ကြီးထဲမှာ ခင်ဗျားရော ကျနော်ပါ စီးဆင်းမျောပါလာခဲ့ကြတာ ဘယ်လောက်ကြာခဲ့ပြီလဲ အဲဒီသတ္တဝါက ခင်ဗျားနဲ့ရော ကျနော်နဲ့ပါ အမျိုးတော်စပ်တာမဟုတ်ဘူး….. ပြောရင်းဆိုရင်း နေသာတဲ့အထဲမှာ မိုးတွေကရွာနေပြန်ပါပြီ…. ခင်ဗျားရောကျနော်ပါ အရက်တပုလင်းနဲ့ လက်ကမြင်းနေတဲ့ ဖျက်မြင်းတွေမဖြစ်မိဖို့ ထမင်းတစေ့နဲ့ အပင်းငြိနေတဲ့ သတိတွေကိုရွှေ့ဖို့...
Page 229 of 229«1...225226227228229
အောင်ကျော်သွင် - သူမ
ညိမ်းအေးသာ ● မတ်လ
ကျော်ဟုန်း ● နိုင်ငံတော် ဝမ်းနည်းမှု
ကမ်လူဝေး ● မြေခွေးများ
စိုးနေလင်း ● ပေးထားချက် သက်သက်ကဗျာ
ကျော်ဟုန်း - မောင်ဆောင်းခအတွက် ထောင်ဝင်စာ
ခက်ဦး - သမီးစကား
Join 93,414 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month April 2018 (159) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ဆွေဝင်း (Myanmar Now) ● သူရဲကောင်းဖြစ်လာသည့် ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်၏ အနာဂတ် https://t.co/HwO3IKgaGL https://t.co/VDo5p1ckC7 about9hours ago ReplyRetweetFavorite
ခိုင်ကြည်သစ် ● တည်ငြိမ်မှုကိုလည်း မထိခိုက်စေ၊ အပြောင်းအလဲတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်စေ https://t.co/UW4kc12okL https://t.co/V5RqLgDipA about9hours ago ReplyRetweetFavorite
ပိုင်စိုးဝေ – သိန်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း https://t.co/3lNEe4nC4F about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကျော်ဆွေဝင်း (အင်းမ) ● အိပ်မက်မှားတဲ့ရာသီ https://t.co/FKSHz1bhC1 https://t.co/ZBus5th86i about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် https://t.co/b99qCkfel9 https://t.co/TYh7t845UP about 11 hours ago ReplyRetweetFavorite
Cartoon Box (3,402)